5 Cloudzọ Cloud dabeere na Order Management Systems na-enyere gị aka ịbịaru ndị ahịa gị nso | Martech Zone
2016 ga-abụ afọ nke Ahịa B2B. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile amalitela ịghọta mkpa ọ dị iziga ọdịnaya nke onwe, nke ndị ahịa na ịzaghachi mkpa ndị na-azụ ahịa ka ọ dị mkpa. Companieslọ ọrụ B2B na-achọpụta mkpa ọ dị ịgbanwe usoro azịza ngwaahịa ha iji mee ka obi jụrụ ụdị omume ịzụ ahịa B2C nke ndị na-azụ ọgbọ na-eto eto.
Faksị, katalọgụ, na ebe oku na-apụ n'anya n'ime ụwa B2B ka eCommerce na-agbanwe iji meziwanye mkpa ndị na-azụ ahịa. Ulo oru B2B nwere ike imeputa ihe omuma nke ndi ahia ma were 2016 site na oke mmiri ozuzo na ezigbo uzo.
Gịnị bụ Usoro Nhazi Usoro?
An usoro nhazi njikwa, ma ọ bụ OMS, bụ ikpo okwu eji etinye maka nhazi na nhazi. Nchịkwa usoro na-agụnye ọtụtụ usoro n'usoro iwu, gụnyere njide data, nkwado, nyocha aghụghọ, ikike ịkwụ ụgwọ, ntinye ngwaahịa, njikwa backorder, na nkwukọrịta ụgbọ mmiri. Usoro Njikwa Nhazi usoro jikọtara ọnụ nke ukwuu na ụlọ ọrụ e-commerce.
OrderCloud site Ugboro anọ bụ ihe kachasị agbanwe agbanwe, ngwa ngwa na igwe ojii zuru oke iji dozie mkpa njikwa usoro gị. Lee ụzọ ise OrderCloud na - enyere gị aka ịbịaru ndị ahịa gị nso
Iru mobile millennials - Emebere OrderCloud na ikpo okwu na-anabata nke ọma, na-enye ndị na-azụ gị ohere ịzụta zụrụ 24x7x365 n'ụlọ ọrụ, n'ụlọ, ma ọ bụ na-aga. Nke a dị mkpa na-eto eto dị ka ọtụtụ puku afọ ugbu a na-ewere 34% nke ọnọdụ azụmaahịa na 2015 ma e jiri ya tụnyere 29% maka boomers nwa (The Economist). Ọgbọ a nke mbụ na-achọ ahụmahụ ọhụụ na-enweghị ntụpọ, dịka 87% nke puku afọ na-eji n'etiti ngwaọrụ teknụzụ abụọ na atọ kwa ụbọchị (Forbes). OrderCloud na - eweputa ahụmịhe ndị ahịa siri ike na - emegharị maka ndị na - azụ B2B taa, na - eme ka ụlọ ọrụ na - aga n'ihu
Mepụta ahụmahụ yiri B2C - Ulo oru B2C amachaala eCommerce ma oge eruola ka B2B soro. Ndị na-azụ B2B abịawo na-atụ anya ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị ha amarala dị ka ndị na-azụ ahịa n'onwe ha. OrderCloud na-eme ka ọ dị mfe maka ụlọ ọrụ B2B itinye ike dị ka B2C, dị ka ngwa ahịa ahaziri iche, usoro ndenye ọpụpụ dị mfe, nyocha ngwaahịa na interface na-enweghị nghọta 83% nke ndị na-azụ B2B na-eche na weebụsaịtị ndị na-eweta ngwaahịa bụ ebe kachasị mma ịzụta, mana naanị 37% kwenyere na ụdị ndị a na-eme nke a (Acution Group).
Gaa ahịa ngwa ngwa - A na-ewu OrderCloud n'elu ikpo okwu mepere emepe ma na-enye ngwaọrụ ndị dị mkpa maka ndị mmepe iji ya. Site na ịrụ ọrụ a, azụmaahịa nwere ike ịmepụta ngwa ahịa eCommerce ahaziri maka afọ-ọsọ ọsọ, yana ike ịgbakwunye, hichapụ, ma gbanwee arụmọrụ ka a na-ewu ya. Ugbu a ị nwere ikike inye ndị mmepe gị ike ma dozie mkpa ndị ahịa gị ngwa ngwa, karịa ịhazi ọnwa ole na ole tupu ndị ahịa gị.
Mee ihe dị gị mkpa - ofbọchị ịnwa ịchọta otu software dị ukwuu iji kpuchie mkpa azụmahịa gị niile. OrderCloud na-ejikọ ọ bụla na ERP gị, CRM, nchịkọta ma ọ bụ sọftụwia ire ahịa. Nke a na - enye gị ike iji wuo ihe azụmahịa gị chọrọ, ma bulie mmetụta nke ngwọta gị.
Mepụta ihe zuru oke- Emebere OrderCloud na afọ iri na isii iji dozie nsogbu B16B dị mgbagwoju anya. E wuru usoro ọrụ a zuru oke na igwe ojii site na akara nke koodu mbụ, na-enye ohere ka azịza gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe niile, ma ọ bụ oge ọnụahịa, iwu nnabata, mbugharị ngwaahịa, nsogbu, asụsụ, ma ọ bụ ego, ka ewuru iji too na imeghari azụmahịa gị.
Ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla idobe onye ahịa n'etiti ihe niile ị na-eme ma nọgide na-eme ka azụmahịa gị gaa n'ihu site na usoro njikwa usoro igwe ojii. Budata akwụkwọ ntanetị anọ nke Four51 iji mụtakwuo ihe kpatara 2016 ji bụrụ Afọ nke ndị ahịa B2B.
Download Afọ nke ndị ahịa B2B eBook Nweta Free Demo nke OrderCloud
Tags: Analyticsb2bb2cigwe-ojiCRMERPUkwuungwa ahianjikwa njikwausoro nhazi njikwaiwu